हामी आफूलाई कति ध्यान दिन्छौँ ? - हामी आफूलाई कति ध्यान दिन्छौँ ?
नेपालबहस संवाददाता २०७५, १० आश्विन, 06:20:23 AM
काठमाडौं । आफ्नो प्रवचन सुन्न आउने एक वृद्धलाई गौतम बुद्धले सोध्नुभएछ– तपाईं कति वर्ष पुग्नुभो ? ७० वर्षजतिका देखिने ती वृद्धले जवाफमा भनेछन्– म ४ वर्षको भएँ । वृद्धको जवाफले वरिपरि रहेका सबै छक्क परेछन् ।
४ वर्ष ? गौतम बुद्धको प्रतिप्रश्नको जवाफमा वृद्धले भनेछन्, ‘हो, मैले जीवनलाई साँच्चिकै जीवनजस्तो गरी बाँच्न थालेको चार वर्ष भयो, आफूले नबाँचेको जिन्दगीको के गणना गर्नु ?’ जीवन बाँचिरहेका छौँ या मृत्यु कुरिरहेका छौँ भनेर हामीमध्ये कतिले सोच्छौँ होला ?
आफूले आफैँभित्र गहिरिएर मानिसको जिन्दगी प्राप्त गर्नुको महत्वलाई कतिले विश्लेषण गर्छौ होला ? मुलुकको ‘सिस्टम’को कुरा गर्ने, देश यस्तो हुनुपर्छ, उस्तो हुनुपर्छ, सिस्टम नै भएन भनेर टिप्पणी गर्नेमध्ये हामी कतिले आफूभित्रको सिस्टमलाई हेर्ने कोसिस गरेका हौँला ?
शारीरिक सिस्टम जसले हामीलाई जीवित राखेर यो संसारमा आफ्नो अस्तित्व आजका दिनसम्म कायम गरिदिएको छ । बाहिरी संसारको बारेमा चिन्ता गर्दागर्दै हामीलाई आफूभित्र आफ्नैबारेमा खोजी गर्ने फुर्सद नै छैन । हामीमध्ये धेरैलाई ठूलाठूला कुरा गर्न मन लाग्छ, सकेसम्म विश्व, ब्रह्माण्डकै कुरा गरेर मानिसलाई प्रभावित पार्न मन लाग्छ, तर आफ्नो जिन्दगीमा भने ससाना कुराले फरक पारिरहेको हुन्छ, असर गरिरहेको हुन्छ ।
पुरुषलाई पनि एन्ड्रोपोजरमेनोपोज हुन्छ भन्ने यो पङ्क्तिकारको लेखमा धेरै अधबैंसे पुरुषहरूले आफू मेनोपोज सिम्टमका अनेक मनोदशाबाट गुज्रिरहेको, तर आफूलाई के भइरहेको छ भन्नेबारेमा गम्भीर रूपमा नलिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । आफूले लेखेका लेखहरूमा साना–ठूला, राम्रा–नराम्रा, प्रशंसा, सुझाबका विभिन्न टिप्पणी र प्रतिक्रिया प्रायः आउँछन् नै ।
अहिलेसम्म कहिल्यै नपाएका फरक प्रतिक्रिया महिला र पुरुष दुवैथरी पाठकबाट पाइरहेका बेला चिनजानका एक तेस्रोलिङ्गी समुदायका भाइले टेलिफोनमा भने– पुरुष या महिलामा मात्र होइन तेस्रोलिङ्गी समुदायमा हर्मोन असन्तुलनका समस्या झनै बढी हुन्छ, हाम्रो समुदायका धेरै मानिस पैँतालीस–पचासको उमेरमा डिप्रेसनमा गएको देखेको छु ।
रोटरीसँग सम्बद्ध एक महिलाले आफूले भोगिरहेको समस्या लेखिदिएर परिवारमा विशेषगरी श्रीमान्ले गरिरहेको व्यवहारमा फरक पारिदिएकोमा धन्यवाद दिएकी थिइन् । मेनोपोज सिम्टमले दुःख दिएर राति निद्रा नपरेपछि के गरूँ गरूँ भएपछि उनी मोबाइल चलाउँदिरहिछन् ।
राति छटपटिएर सुत्न नसक्ने, घरी न घरी मोबाइल चलाउने गर्दा श्रीमान्ले उनको अरू कसैसँग सम्बन्ध गाँसियो कि भनेर शङ्का गर्दा जीवनको मात्र होइन सम्बन्धको पनि सङ्क्रमणकाल धानिरहेकी रहिछन् ।
श्रीमान्को साथ र भावनात्मक सहयोग आवश्यक परेको बेला अनावश्यक शङ्का, उपशङ्काले आत्महत्या नै गरूँ कि जस्तो लागेको थियो रे । पुरुषलाई भएको यस्तै समस्या महिलाले नबुझ्दा आएका समस्या पनि अनेक छन् । विशेषगरी श्रीमान्–श्रीमतीको सम्बन्धमा । तेस्रोलिङ्गीमा पनि आफ्ना पार्टनरहरूसँग यसप्रकारका समस्या हुँदा हुन् ।
जब एक–अर्काको सम्बन्ध नाजुक अवस्थामा पुग्छ, कसैले राम्रो स्वरले मीठो बोलेर अलिकति भावनात्मक कुरा गरिदिँदा पनि निकटता महसुस हुन सक्छ । परिणामतः बाहिर अरूले हेर्दा जीवित देखिएका सम्बन्धहरू सम्बन्धहीन हुन पुग्छन् । भावना र शरीर दुवैलाई निर्देश र नियन्त्रण गर्ने मस्तिष्कका बारेमा त झन् हामी कमै मात्रामा चर्चा गर्छौँ । हर्मोनको असन्तुलनले शरीर र मस्तिष्क दुवैमा असर गरिरहेको हुन्छ ।
हामी टाउकोभित्र रहेको मस्तिष्कभन्दा बढी बाहिरको कपाललाई ध्यान र महत्व दिन्छौँ । हेयर स्टाइलहरू परिवर्तन गर्छौं, थरीथरीका रङ लाउँछौँ । भित्र जेसुकै होस् हामीलाई बाहिर राम्रो देखिनुछ । यस्तै शरीरलाई भन्दा लुगालाई महत्व दिन्छौँ ।
मानिसको शरीर पञ्चतत्वले बनेको हुन्छ भन्ने हाम्रो शास्त्रीय मान्यता छ, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि र आकाश । यसको अर्थ सारा ब्रह्माण्ड हाम्रो शरीरभित्रै छ । मानिसको शरीर आफैँमा ब्रह्माण्ड हो भनी वेदमा उल्लेख गरिएको छ । हाम्रो शरीरमा पानी ७२ प्रतिशत, पृथ्वी १२ प्रतिशत, वायु ६ प्रतिशत, अग्नि ४ प्रतिशत र बाँकी आकाश अर्थात् मस्तिष्कले भरिएको हुन्छ भनिन्छ ।
यी पाँच तत्वको सन्तुलन नै मानिसको जीवन हो । शरीर, मस्तिष्क, मन, भावना फरक कुरा हुन्, मस्तिष्कले यी सबै कुरालाई निर्देश गरिरहेको हुन्छ । ब्रह्माण्डबराबर मानिसको शरीर छ भन्ने कुरा धेरैले बुझ्दै नबुझी यो संसार छोडेर जान्छन् । जतिले बुझेका छन्, तिनले आफूभित्रको संसारभन्दा बाहिरकै संसारलाई महत्व दिएर अघि बढेका छन् ।
शरीरको लागि खाना मुख्य कुरा हो । आफ्नो शरीरलाई के कुराले फाइदा र हानि गर्छ भन्ने हामीलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि ‘के फरक पर्छ र रु’ भन्दै अघि बढ्ने हामीमध्ये धेरै छौँ । खानाको असर शरीर र सोच दुवैमा पर्छ भनिन्छ । खानासँगै शारीरिक अभ्यास र ध्यान त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छन् ।
ध्यानलाई मस्तिष्कको अभ्यासका रूपमा पनि लिन सकिन्छ । पूरै शरीरलाई पकडमा राख्ने मस्तिष्कका बारेमा धेरै कमले सोच्ने गरेका छौँ । मेडिटेसन अर्थात् ध्यान सोचलाई बदल्न सक्ने एक मात्र उपाय हो, जसले मानिसलाई सकारात्मक ऊर्जा दिन्छ । जीवनलाई अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ डो¥याउँछ । तर, हामी टाउकोभित्र रहेको मस्तिष्कभन्दा बढी बाहिरको कपाललाई ध्यान र महत्व दिन्छौँ ।
हेयर स्टाइलहरू परिवर्तन गर्छौं, थरीथरीका रङ लाउँछौँ । भित्र जेसुकै होस् हामीलाई बाहिर राम्रो देखिनुछ । यस्तै शरीरलाई भन्दा लुगालाई महत्व दिन्छौँ । शरीर जेनतेन चलिरहोस् लुगा राम्रो देखिनैपर्छ भन्ने हामीमध्ये धेरैको मान्यता हुने गरेको छ । हामीले पिउने पानी र फेर्ने सासको महत्व कति छ भनिरहनुपरेन ।
अचम्म त के छ भने मानिसको जीवनमा नभइनहुने हावा र पानी प्रकृतिले स्वतः दिएको छ, किन्नुपर्दैन । काठमाडौंलगायतका शहरलाई कङ्क्रिडमा बदलेका कारण गतिलो पानी नपाएर किन्नुपर्ने अवस्था छ, अलग कुरा हो, तर सामान्यतया पानी किनेर किनेर खानुपर्दैन, प्रकृतिले बिनाभेदभाव सबैलाई उपलब्ध गराएको छ । हावाको बारेमा त झन् भन्नैपरेन ।
युवा उद्यमी गोमा प्रधानले सामाजिक सञ्जालमा एकपटक लेखेकी थिइन्– ‘हामीले सामान्य अवस्थामा बाल मतलब नगरेको हावाको मूल्य अस्पतालमा अक्सिजनका रूपमा किन्नुपरेपछि थाहा हुन्छ ।’ मेडिटेसन गर्न पनि एकान्तमा बसेर आँखा चिम्लिए पुग्छ, कुनै खर्चबर्च लाग्दैन । यसरी हेर्दा जिन्दगी बाँच्न भनेर हामी जे–जसरी दौडधुप गरिरहेका हुन्छौँ, जीवन बाँच्न नभइनहुने कुराका लागि भने धेरै दुःख र दौडधुप गर्नुपर्दैन । यद्यपि जीवनसँग जोडिएर आउने अन्य कुराका लागि काम नगरी पनि हँुदैन ।
हामी अनेक व्यवहार धान्ने क्रममा अल्झिँदै जाँदा गफचाहिँ ‘जीवन धान्न गर्नैपऱ्यो’ भनिरहेका हुन्छौँ । प्रकृतिले चाहेन भने हामी आफूले आफूलाई एकछिन पनि धान्न सक्दैनौँ । दश मिनेट पृथ्वीमा हावा नचले के होला रु त्यस्तो अवस्थामा अर्बौंको सम्पत्ति भए पनि, पीएचडी डिग्री लिए पनि हामी आफूले आफूलाई धान्न सक्दैनौँ ।
हामीलाई हामीले नै यो संसार धानिरहेका छौँ भन्ने लागे पनि धान्नचााहँ यो संसार ९प्रकृति० ले हामीलाई धानिरहेको छ । प्रकृति र जीवनको चक्र करिब उस्तैउस्तै छ । मृत्युले आफ्नातर्फ ध्यान लाउनुअघि नै आफूले आफैँलाई पनि ध्यान दिएर जिन्दगी बाँच्न सक्यो भने मानिसलाई धेरै कुराको भ्रमबाट मुक्ति मिल्छ जस्तो लाग्छ । यद्यपि भ्रममा बाँच्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो कुरा हो ।
घटना र विचार/ बबिता बस्नेत
२०७५, १० आश्विन, 06:20:23 AM